कोरोना संक्रमणबाट वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा.पूज्यश्री कार्कीको निधन – हाम्रो देश
कोरोना संक्रमणबाट वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा.पूज्यश्री कार्कीको निधन
काठमाडौं, जेठ ५, कोरोना भाइरस संक्रमणबाट आँखारोेग विशेषज्ञ प्रा.डा.पूज्यश्री कार्कीको निधन भएको छ । संक्रमण पुष्टि भएपछि डा. कार्कीको नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। स्वास्थ्यमा समस्या बढ्दै गएपछि १० दिनदेखि आइसियूमा उपचारत डा. कार्कीको आज बिहान निधन भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
उहाँ विगत एक दशकदेखि किष्ट मेडिकल कलेजमा आँखा रोग विभागको प्रमुखमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नेपाल मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस गर्नुभएको उहाँले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट एमडी गर्नुभएको थियो । कार्कीको निधनप्रति नेपाल चिकित्सक संघले शोक व्यक्त जारी गरेको छ ।
संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले जारी गरेको शोक वक्तव्यमा डा. कार्कीले नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको सम्झना गरिएको छ । ‘इमान्दार, लगनशील र निष्ठावान प्रतिष्ठित नेत्ररोग विशेषज्ञ चिकित्सकलाई गुमाउन पुगेकोमा नेपाल चिकित्सक संघ परिवार अत्यन्तै मर्माहित भएको छ,’ डा. रिजालले वक्तव्यमा लेख्नुभएको छ ।